eedeysanayaal Soomaali ah oo Maxkamad sii deysay | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta eedeysanayaal Soomaali ah oo Maxkamad sii deysay
eedeysanayaal Soomaali ah oo Maxkamad sii deysay
Afar Soomaali ah oo ku eedeysnaa in ay ka dambeeyeen Qarax ka dhacay Maqaaxi lagu shaaheeyo oo ku dhow Garoonka Diyaaradaha Jommo Kenyatta ee dalka Kenya 2014-kii ayaa la sii daayay, kadib markii lagu waayay wax cadeyn ah.
Qaraxan oo ahaa mid la soo dhigay meel qashinka lagu shubo oo Maqaaxida ku dhow ayaanan geysan wax khasaare ah waxaana uu dhacay maalin Isniin ah 22-kii January 2014-kii, sida ay ku warameen saraakiisha Ciidamada Booliska Kenya.
Ragga eedeysanayaasha ahaa oo laga qabtay meel aan sidaas uga fogeyn goobta uu qaraxa ka dhacay ayaa waxaa lagu kala magacaabaa Xasan Cabdi Maxamed, Maxamed Cismaan Cali, Yuusuf Warsame iyo Garaad Xasan Fer.
Booliska ayaa sheegay raggan in ay uga shakiyeen Argagixisanimo, balse eedeysanayaasha laftirkooda oo hadlay ayaa waxa ay beeniyeen in ay xiriir la lahaayeen ururka Al-shabaab, maadaama raggan ay Soomaaliya ka yimaadeen Afar bilood kadib markii uu dhacay weerarkii suuqa Westgate, oo ay ku dhinteen ugu yaraan 67 qof.
Garsoore Roselyn Oganyo ayaa sheegay in xeer ilaalintu ay ku guul dareysteen in ay caddeeyaan eedeymaha loo haysto raggan, sidaasina Maxkamaddu ay ku sii deysay, wixii hada ka dambeeyana ay yihiin fasax oo magaaladooda ay mari karaan.
“Ka dib markaan tixgeliyay caddaymaha la soo bandhigay ka hor maxkamadda, waxaan ogaaday in xeer-ilaalintu ay ku guuldaraysatay in ay caddeeyaan dacwadda mid kasta oo raggan ka mid ah, xitaa xeer ilaalintu shakigooda ma ahan mid macquul ah” Ayuu yiri Garsoore Roselyn.
Kenya ayaa wajaheysa weeraro xiriir ah oo kaga imaanaya ururka Al-shabaab kadib markii ay ciidamo u soo direen Koonfurta Soomaaliya bishii October 2011-kii si Ciidanka Dowladda ay uga caawiyaan la dagaallanka Al-shabaab.
Weeraradii ugu waa weynaa ee Kenya ka dhacay oo Al-shabaab ay geystaan waxaa ka mid ahaa midkii Shabaab ay ku qaadeen Jaamacadda Gaarisa April 2015-kii, oo ay ku dhinteen 148 qof oo badankood ahaa Arday.